Sheekh Nadiir Sayid Nuur Oo Kahadlay Arimaha Diimaha. - Cakaara News
Sheekh Nadiir Sayid Nuur Oo Kahadlay Arimaha Diimaha.
Jigjiga(CN) Sabti.April.25.2015, gudoomiyaha maxkamada shareecada DDSI ahna gadh-wadeenka geedi socodka arimaha diimaha ee xafiiska nabadgaliyada DDSI Sheekh Nadiir Sayid Nuur ayaa sheegay in wakhti xaadirkan wax badan laga qabtay oo lasaxay arimaha masjidulcalaha deegaanka boqolkiiba 90, isagoo carabka kudhuftay inta yar ee hadhayna (10) inuu kusii wajahan yahay.
Sheekh Nadiir oo ah lataliyaha madaxwaynaha ee dhinaca nabadgaliyada ayaa qiimaynta lixdii bilood ee lasoo dhaafay ay xukuumadu ku amaantay sida uu u wado shaqooyinka loo xilsaaray. Sheekh nadiir ayaa intii xilkan loo magacaabay waxaa uu aad u saxay arimaha masjidul calaha deegaanka.
Gudoomiyaha oo ay hoos yimaadaan dhamaan masjidul calaha arimaha diimaha iyo maxkamadaha ayaa shaqooyin cad kaqabtay ladagaalanka xagjirnimada isagoo masjidul calaha wax badan kasaxay. Sidoo kale waxaa sheekhu tilmaamay in dhamaanba degmooyinka iyo gobolada qaab dhismeedkooda diimiga ah ladhamaytiri doono.
Sheekha ayaa warbixintiisa kudaray in lasamaynayo haayad diini ah oo shaaficiyo ah islamarkaana leh qaab dhismeed dhamaytiran oo u qaabilsan sidii ay ummada deegaanka uga haqab tiri lahayd arimaha diinta.